Maxaa kala haysta Burundi iyo Midowga Yurub? - BBC News Somali
Maxaa kala haysta Burundi iyo Midowga Yurub?
30 Maarso 2016
Diblomaasiyiin reer Yurub ah ayaa sheegay inay Midowga Yurub qorsheynayaan inay dhimaan lacagta faraha badan ee ay siiyaan ciidanka nabad ilaalinta ee dalka Burundi ka jooga Somalia, taas ah qaab ay culays ku saarayaan madaxweynaha Burundi, Pierre Nkurunziza.
Diblomaasiyiintu waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in lacagtaas aan dib dambe loo soo marsiin doonin dowaldda Burundi. 20% ay dowladdu la hari jirtay, oo u dhiganta 13 milyan dollar sanadkii, ayaa la jari doonaa.
Dad ka badan 400 qof ayaa lagu dilay Burundi tan iyo markii madaxweyne Nkurunziza uu go'aanka ku gaaray inuu mar 3aad xukunka isu-taago. Askar ka badan shan kun oo reer Burundi ah ayaa ka mid ah ciidanka Midowga Afrika ee ka hawl gala Somalia.
Midowga Yuurb horey ayuu u dhimay lacagihii uu siin jiray AMISOM, hadda maxaa uu u bartilmaameedsanayaa Burundi oo kaliya? Lacag intee dhan ayaana Burundi ka soo gali jirtay hawlgalka AMISOM ? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Xasan Cali Geele u bandhigay Dr Ibraahim Faarah Bursaliid oo ka faalooda arrimaha caalamka.